Dowladda Federaalka oo gacanta ku dhigtey madaxii amniyaadka al-Shabaab ee Benaadir • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Dowladda Federaalka oo gacanta ku dhigtey madaxii amniyaadka al-Shabaab ee Benaadir
Dowladda Federaalka oo gacanta ku dhigtey madaxii amniyaadka al-Shabaab ee Benaadir
Posted: HORSEED STAFF - June 19, 2017
Wasiirka Amniga gudaha Abuukar Islow Ducaale
Dawladda Soomaaliya ayaa shaacisay howlgal laga sameeyey qeybo kamid ah Suuqa weyn ee Bakaaraha in lagu soo qabtay Madaxii Amniyaadka Ururka Alshabaab ee gobolka Benaadir Cabdiahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaan (Ciise Tarabuun) , waxana howgalkan uu dhacay maanta oo Isniin ah.
“….Waxaa maanta qabanay C/wahaab Khaliif Axmed oo loo yaqaan (Ciise Tarabuun) oo dhibaatooyinkii ka dhacayay caasimadda masuuliyadeeda lahaa, hadda wuxuu ku jiraa gacanta dawladda oo caddaaladda ayaa la horgeynayaa”ayuu yiri Wasiirka Amniga oo raaciyey.
Dhanka kale Wasiirka ayaa ka hadlay waddooyinka xaafadaha dhex-dooda maray ee Caasimadda oo qeybo kamid ah la xiray, isagoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in dulqaad ay muujiyaan maadaama waxa laga shaqeynayo ay yihiin amni, una baahan yahay feejignaan dheeri ah.
“….Si aan u sii xoojinayo amniga ciidanku waxay sameyn doonaan wax walba oo suuragal ah. Waxaa la xiray qaar kamid ah jidadka xaafadaha dhex-dooda mara oo horey u furnaa ujeedka loo xirayna waa in lagu badbaadinayo shacabka Soomaaliyeed. Maalin walba qaraxyada iyo dhibabka ay geystaan argagixisadu waxaan ku weynaa nafta dadkeena qiimaha badan, si taas looga baaqsado waxaa lagama maarmaan ah in la xoojiyo amniga caasimadda lalana shaqeeya ciidamadda howlgalka ku jira”ayuu yiri Wasiirka Amniga.